एडोब फोटोशपमा दुई फोटोहरूको रंग कसरी मिल्ने क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशप फोटोमन्ट्याजेस बनाउनका लागि धेरै उपयोगी कार्यक्रम हो। त्यहाँ विभिन्न तस्विरहरूको काटआउट बनाउने धेरै तरिकाहरू छन्। यो ट्यूटोरियलमा म तिमीलाई सिकाउँछु कसरी एक साधारण ट्रिकको साथ एडोब फोटोशपमा दुई तस्बिरहरू जोडा मिलाउन र धेरै प्रभावकारी। यसलाई नबिर्सनुहोस्!
1 दुबै छविहरू खोल्नुहोस्
2 विषय छान्नुहोस् र तह मास्क बनाउनुहोस्
3 नयाँ समायोजन तह सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई लेयर २ मा लागू गर्नुहोस्
4 रंग सुधार गर्नुहोस्
5 त्रुटिहरू सच्चाउँछ
दुबै छविहरू खोल्नुहोस्
हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो हामीले प्रयोग गर्न लागेका दुईवटा फोटोशपमा खोल्नुहोस् Photomontage बनाउन। क्रममा तिनीहरूलाई खोल्ने अवसर लिनुहोस्, पहिले तपाईलाई पृष्ठभूमिको रूपमा प्रयोग गर्न लाग्नु भएको एउटा खोल्नुहोस् र यसमा शिर्षक समावेश भएको छवि राख्नुहोस् तपाइँ त्यो पृष्ठभूमिमा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले ट्यूटोरियललाई अझ राम्ररी अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ मैले लेयर (लेयर १, पृष्ठभूमिमा र लेयर २, केटी) लाई नाम दिएँ।
विषय छान्नुहोस् र तह मास्क बनाउनुहोस्
अब खेल्नुहोस् विषय चयन गर्नुहोस्। तपाईले छनौट गर्ने उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले चाहानुहुन्छ, मँ तपाईलाई यहाँ एक ट्यूटोरियल छोड्ने छु जहाँ तपाई सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् र तिनीहरूसँग राम्रो चयनहरू गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईले छनौट गर्नुभयो, हामी जानेछौं परिमार्जन, चयन, संक्षिप्त र हामी पिक्सेल को एक जोडी समाप्त हुनेछ। केहि पनि हुँदैन यदि माथिको छविमा चिन्ह लगाईएको प्रतीक थिचेर थिच्दा सही छैन हामी लेयर मास्क बनाउनेछौं र हामी ती बगहरू पछि सच्याउन सक्छौं।
आदेश + T (म्याक) वा नियन्त्रण + T (विन्डोज) को साथ विषय परिवर्तन र विषय सार्न ताकि यो पृष्ठभूमि को एक आनुपातिक आकार छ। विकल्प (म्याक) वा वैल्ट (विन्डोज) होल्ड गर्न नबिर्सनुहोस् ताकि जुम इन वा आउट गर्दा यो लहरिने छैन।
नयाँ समायोजन तह सिर्जना गर्नुहोस् र यसलाई लेयर २ मा लागू गर्नुहोस्
माथिको छविमा चिनो लगाइएको प्रतीकमा क्लिक गर्नुहोस् र «वक्र» मा क्लिक गर्नुहोस्।। समायोजन तह अब तहहरूको छेउमा देखा पर्नेछ। हामीलाई यसको आवश्यक छ लेयर दुईमा मात्र, केटीलाई, किनभने उनी एक हुन् जसमा हामी रंग समायोजित गर्न जाँदैछौं। त्यसोभए यो केवल तह २ मा लागू हुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि यो माथिको अवस्थित छ, र समायोजन तहमा क्लिक गरेर तपाईंको कम्प्युटर किबोर्डमा थिच्नुहोस्। आदेश + विकल्प + G (म्याक) वा नियन्त्रण + Alt + G।
रंग सुधार गर्नुहोस्
अर्को चरण हुनेछ गुण प्यानल पत्ता लगाउनुहोस् (मैले यसलाई माथि चिन्ह लगाएको छु)। होल्ड गर्दै विकल्प कुञ्जी (म्याक) वा Alt (विन्डोज) हामी क्लिक गर्नेछौं «स्वचालित»। एउटा विन्डो खुल्नेछ। बक्स जाँच गर्नुहोस् "गाढा र हल्का र forहरू खोज्नुहोस्" र निश्चित गर्नुहोस् कि "तटस्थ मिड्टोनहरू बन्द छ"।
En फोटोशप लक्ष्य र क्रपिंग रंगहरूपूर्वनिर्धारित द्वारा, यसले छायालाई कालो र हाइलाइटमा सेतो दिन्छ। उत्तम परिणामहरूका लागि ती र colorsहरूलाई परिमार्जन गर्नुहोस्। मा क्लिक गर्नुहोस् छाया बाकस र अँध्यारो क्षेत्रमा आईड्रोपर नमूनाको साथ छविबाट प्रकाशमा हामी नमूनालाई प्रकाश क्षेत्रमा लिनेछौं। मैले यसलाई घाममा सिधै गर्नबाट रोकेको छु किनकि यो लगभग सेतो छ र हामीले पहिल्यै देखिसकेका छौं कि यी अवस्थाहरूमा अन्य र colorsहरूसँग काम गर्न उत्तम हुन्छ।
हामी त्यो स्वचालित समायोजनसँग के पाउँछौं राम्रोसँग पहिले नै राम्रो हुनेछ, तर सुधार गर्नका लागि कर्भमा विभिन्न बिन्दुहरू सार्नुहोस् यो पूर्ण रूपमा तपाइँको मनपर्ने मा छ सम्म।
यसको फाइदा उठाउँदै हामीसंग लेयर मास्क छ, किनारहरू हेर्न विस्तृत र, ब्रशको साथ, कुनै त्रुटिहरू सच्याउन लेयर मास्कमा पेन्ट गर्नुहोस् कि छनौट हुन सक्छ। याद गर्नुहोस् कि सेतो रंगको साथ तपाईं लेयरको केही अंश देख्न छाड्नुहुन्छ र कालोको साथ तपाईंले त्यसलाई लुकाउनुहुन्छ यो अन्तिम परिणाम हो!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » एडोब फोटोशपमा दुई तस्बिरहरू कसरी मिलाउने